Budada Phaseolin (13401-40-6) hplc = 98% | Nacnac AASraw Fat Tukasho
/ Products / Xabbad dufan leh / Budada Phaseolin
Rating: SKU: 13401-40-6. Category: Xabbad dufan leh
AASraw wuxuu la leeyahay karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud oo ah budada Phaseolin (13401-40-6), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Phaseolin waa glycoprotein trimeric ah oo ku urursan baakadaynta borotiinka ee bacaha caadiga ah (Phaseolus vulgaris L.) miraha. Cadaadiska ka yimaada tarolitiktinti waxay u badan tahay inay noqoto mid muhiim u ah budada "phaseolin", kaas oo u oggolaanaya raasamaalka xasaasiga ah ee kaydinta borotiinka.
Fiidiyowga budada Phaseolin
Calaamadaha aasaasiga ah ee budada Phaseolin
Name: Budada Phaseolin
Qaaciddada Molecular: C20H18O4
Miisaanka kelli: 322.358
Dufanka Phaseolin Raven ee wareegga miisaanka lumay
Budada Phaseolin (CAS 13401-40-6)
Isticmaalka budada Phaseolin
Budada Phaseolin waa glycoprotein trimeric kaas oo ku uruuray borotiinka qashinka ee bacaha caadiga ah (Phaseolus vulgaris L.). Cadaadis la'aanta faytawiinititik waxay u badan tahay inay ahaato mid muhiim u ah budada cayriin ee Phaseolin, taas oo u oggolaanaysa isku-dhafka xasilloon ee kaydinta borotiinka. Qaadashada qaab dhismeedka "protease-resistantant" wuxuu ku xiran yahay isku-duubnaanta istiraatiijiyada budada Phaseolin ee looxa dhejiyo, geedi socod deg deg ah oo hufan oo ku dhacaya dib-u-kicinta indoplazmic. In unugyada cotyledonary beedka Phaseolin chimer trimping waxay u badan tahay in lagu caawiyo by factors cellular iyo sidoo kale dhacdaa in joogitaanka horjoogayaasha ee glycosylation N-linked. Nidaam loo goosanayo xarumaha hoose ee unugyada aan la isku haleynin iyo dhexdhexaadinta dhexdhexaadinta ee qaybta hore ee waraaqda qarsoodiga ah ayaa damaanad qaadi doonta in qaabka proteese-diidan ee borotiinka loo geeyaa kaydinta vacuoles, taasoo ka dhigaysa waxtarka guud ee keydinta borotiinka kaydinta.
Digniin ku saabsan budada Phaseolin Raw
Aragti ahaan, awoodaha xannibaadda enzyme-ka ee phaseolamin waxay yareyneysaa tirada kalooriyadaha ku saleysan karbohaydraytka ee la nuugo loona beddelo dufanka jirka. Awoodin in loo jajabiyo istaarjiyada sonkorta fudud, nidaamka dheef-shiidka ayaa cayrinaya istaatishyada qayb ahaan la dheefshiido inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa caloosha. Daraasad lagu sameeyay Jaamacadda Kalifoorniya ayaa qortay in phaseolamin-ka uu joojiyo ama dib u dhigo dheef-shiidka cunnooyinka adag, taas oo hoos u dhigeysa culeyska guud iyo cabirka dhexda ee ka-qaybgalayaasha miisaanka culus. In kasta oo qaar ka mid ah dhiggooda ka hortagga dufanka sida orlistat (magaca ganacsiga Alli) ay soo saaraan waxyeelo caloosha iyo caloosha oo xun iyada oo ay ugu wacan tahay hawshooda xakameynta enzyme-ka, inta badan tijaabooyinka bukaan-socodka waxay muujiyeen xaalad yar oo shuban iyo calool xanuun ah oo u dhexeeya dadka isticmaala Phaolamin.
Hoos-u-dhaca Heerka Glycemic
Sababtoo ah soosaarida digirta cad ayaa faragalinaysa nuugista karbohaydraytyada iyo u beddelashada sonkorta fudud, waxay bixin kartaa daaweyn suurtagal ah oo sonkorowga iyo hypoglycemia falcelin leh. Dr. Jay Udani – agaasimaha caafimaadka ee cilmi baarista Medicus iyo qoraaga daraasada 2007 University of California ee budada ceeriin ee Phaseolin (CAS 13401-40-6) –waxa uu soo jeediyay in xarunta ay hoos u dhigi karto heerka glycemic ee cunnooyinka istaarijka sida rootiga cad . Adoo hoos u dhigaya awooda jirku u leeyahay inuu ka helo gulukooska cuntooyinkan, budada Phaseolin waxay ka hortagi kartaa dhiiga kadiska ah ee sonkorta dhiiga iyo dhibaatooyinka ka dhasha. Intaa waxaa sii dheer, kaabista joogtada ah waxay ka hortagi kartaa ama daahin kartaa bilawga nooca 2aad ee sonkorowga dadka qaba hypoglycemia (pre-diabetes) In kasta oo adeegsigan aragtida ahi u muuqdo mid rajo leh, haddana laguma baarin tijaabooyin caafimaad oo ballaadhan.
Budada Phaseolin, borotiinka muhiimka ah ee keydka abuurka globin ee beebka caadiga ah, Phaseolus vulgaris L., waxa uu xisaabiyaa ilaa 50% ka mid ah borotiinka tirada guud. Rugta degdegga ah ee budada Phaseolin ee geedaha bislaada waxay bilaabmaa maalmo 14 ka dib ubax oo sii socota qaar ka mid ah 12-14 maalmood ka dheer. Si kastaba ha noqotee, xaddiga iyo qiimaha budada budada ee Phaseolin, oo la xidhiidha kala duwanaanshaha bilowga, dhererka, joojinta, iyo xaddiga of synthesis, ayaa lagu muujiyey inay kala duwan yihiin genotypes. Kaliya 3 Phaseolin Noocyada Fayadhowrka Noocyada, T, S, iyo C ka dib kalluunka Tendergreen, Sanilac, iyo Contender siday u kala horreeyaan, ayaa lagu ogaaday in ka badan 100.
Qiyaasaha cirifka ah ee miisaanka molecular iyo dhibcaha isoelectric ee polypeptides protein xabbada ah ee budada Phaseolin, iyo sidoo kale habka loo arko laga soo duubay peptide, ayaa soo jeedinaya in polypeptides budada cayriin Phaseolin waa borotiino isku mid ah. Iyada oo ku saleysan natiijooyinka isgoysyada beeraha ee leh saddexda hababka elektroonikada, hiddo-xakamaynta polypeptides-ka mid kasta oo ka mid ah noocyada budada cayriin ee Phaseolin waxay u muuqdaan in ay si adag u xirmaan, dhaxalaan boodh, iyo alleles waa codominant. Kala duwanaansho dheeraadka ah ee ku jirta maaddada budada Phaseolin, oo ku salaysan qiyaasaha isticmaalka galmada immunoelectrophoresis, ayaa laga heley xariiqda caanaha. Inkasta oo dadka intiisa badani ay muujinayaan kala-qaybin joogto ah iyo dhaxaltooyo tiro badan, qaar ka mid ah xariijimaha gadaashooda oo ay yeesheen horumarinta Phaseolin-naqashada budada cayriin ayaa u muuqda in ay qaadaan hiddo-yar oo leh waxyaabo waaweyn. Hal hiddo oo halis ah ayaa hoos u dhigta tirada budada Phaseolin si aan ka yareyn kala badh heerarka caadiga ah ayaa dhowaan lagu ogaaday in lagu daro P. vulgaris duurjoog ah.
Budada Phaseolin budada ah (CAS 13401-40-6)
Suuq-geynta Phaseolin Powder Market
Sida loo iibsado budada Phaseolin (CAS 13401-40-6) laga bilaabo AASraw